Coco (2017) | MM Movie Store
ဂီတကို ရူးသှပျတဲ့ မဈဂဲလျရဈဗာရာဆိုတဲ့(၁၂)နှဈအရှယျကောငျလေးတဈယောကျ ဂီတနဲ့ပတျသကျလို့မိသားစုရဲ့ တားမွဈခကျြကို ဆနျ့ကငျြပွီးဝါသနာပါရာ ဂီတအတှကျစှနျ့စားတဲ့အကွောငျး ဇာတျအိမျဖှဲ့ထားတာပါ။
အငျမယျဒါရဈဗာရာဟာ ဂီတပညာရှငျတဈယောကျရဲ့ဇနီးဖွဈပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူက မိသားစုထကျ ဂီတကိုရှေးခယျြခဲ့ တာကွောငျ့ အငျမယျဒါဟာ ဂီတကိုစိတျနာခဲ့ပွီးသမီးဖွဈသူ ကိုကိုကိုလညျး ဂီတနှငျ့ခပျကငျးကငျးနဖေို့တားမွဈခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ အငျမယျဒါဟာ မိသားစုစီးပှားရေးအဖွဈဖိနပျ ခြုပျလုပျငနျးလုပျပွီး နထေိုငျပါတယျ။အငျမယျဒါတဈယောကျ မြိုးရိုးစဉျဆကျတဈလြှောကျဂီတကို ဘယျလိုပဲတားမွဈထားပါစေ ဂီတပိုးကသူ့ရဲ့မွဈဖွဈတဲ့ မဈဂဲလျရဈဗာရာဆီမှာ ပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
မဈဂဲလျဟာ ဟိုးတုနျးက နာမညျကြျောဂီတပညာရှငျအာနကျဈတိုဒီလာခရုဇျကို လေးစား အားကပြွီးသူ့လိုမြိုးဖွဈဖို့ စိတျ ကူးအိပျမကျတှနေဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့ ဂီတပိုးရှိနတေဲ့ မဈဂဲလျလေးဟာသူ့အဘှားရဲ့ မိသားစုဓာတျပုံကို ရှာတှပွေီ့းနောကျမှာတော့ဂီတနဲ့ သူ့မိသားစုကွားမှာ ကွီးမားတဲ့ဆကျစပျမှုတဈခုရှိတယျဆိုတာသိသှားခဲ့ပါတော့တယျ။
တဈရကျမှာတော့ မက်ကဆီ ကနျအထိမျးအမှတျပှဲတဈခုဖွဈ တဲ့သသေူအတှကျ မိသားစုဝငျ တှေ ရညျမှနျးဆုတောငျးတဲ့ပှဲမှာမဈဂဲလျဟာ ဂီတာစှမျးရညျပွသ ဖို့ လုပျထားပမေယျ့သူ့အဘှားက ဂီတာကို ဖကျြဆီးပွီး တားဆီးပါ တယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ မဈ ဂဲလျဟာ အာနကျဈတိုရဲ့မြိုးဆကျဆိုတာ သိသှားပွီးနောကျမှာတော့သူ့အဘိုးဖွဈတဲ့ အာနကျဈတိုရဲ့ ဂီတာနဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျဖို့ဆုံးဖွတျပွီး အာနကျဈတိုရဲ့ဂူမှာ ဂီတာသှား ယူပါတော့တယျ။
သူ့အဘိုးရဲ့ ဂီတာကို တီးလိုကျပွီးနောကျမှာ တော့မဈဂဲလျဟာ သကျရှိလူသား တှကေို မတှရေ့တော့ဘဲသပွေီး သားလူတှကေိုပဲ တှရေ့တဲ့ပုံစံမြိုး ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
သသေူတှနေတေဲ့မွို့ (Land of Dead) မှာမဈဂဲလျတဈယောကျကှယျလှနျသှားပွီဖွဈတဲ့သူ့မိသား စုဝငျတှနေဲ့ ဆုံခဲ့သလို ဒနျတီဆိုတဲ့ခှေးကလေးနဲ့အတူ သူ့အဘိုးအာ နကျဈတိုကိုလိုကျရှာပွီး သကျရှိ လူသားတဈယောကျပွနျဖွဈဖို့ ကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။
မဈဂဲလျတဈယောကျ သေ သူတှနေတေဲ့မွို့မှာဘာတှရေငျ ဆိုငျရမှာလဲ။ သူအားကနြရေတဲ့ အဘိုးရဲ့လြှို့ဝှကျခကျြကို သိသှားပွီးနောကျမှာဘာတှဆေကျဖွဈ မလဲဆိုတာတော့…. ။
ဂီတကို ရူးသွပ်တဲ့ မစ်ဂဲလ်ရစ်ဗာရာဆိုတဲ့(၁၂)နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက် ဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုရဲ့ တားမြစ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီးဝါသနာပါရာ ဂီတအတွက်စွန့်စားတဲ့အကြောင်း ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာပါ။
အင်မယ်ဒါရစ်ဗာရာဟာ ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မိသားစုထက် ဂီတကိုရွေးချယ်ခဲ့ တာကြောင့် အင်မယ်ဒါဟာ ဂီတကိုစိတ်နာခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူ ကိုကိုကိုလည်း ဂီတနှင့်ခပ်ကင်းကင်းနေဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အင်မယ်ဒါဟာ မိသားစုစီးပွားရေးအဖြစ်ဖိနပ် ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီး နေထိုင်ပါတယ်။အင်မယ်ဒါတစ်ယောက် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်ဂီတကို ဘယ်လိုပဲတားမြစ်ထားပါစေ ဂီတပိုးကသူ့ရဲ့မြစ်ဖြစ်တဲ့ မစ်ဂဲလ်ရစ်ဗာရာဆီမှာ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
မစ်ဂဲလ်ဟာ ဟိုးတုန်းက နာမည်ကျော်ဂီတပညာရှင်အာနက်စ်တိုဒီလာခရုဇ်ကို လေးစား အားကျပြီးသူ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ စိတ် ကူးအိပ်မက်တွေနဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့ ဂီတပိုးရှိနေတဲ့ မစ်ဂဲလ်လေးဟာသူ့အဘွားရဲ့ မိသားစုဓာတ်ပုံကို ရှာတွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ဂီတနဲ့ သူ့မိသားစုကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ဆက်စပ်မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ မက္ကဆီ ကန်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတစ်ခုဖြစ် တဲ့သေသူအတွက် မိသားစုဝင် တွေ ရည်မှန်းဆုတောင်းတဲ့ပွဲမှာမစ်ဂဲလ်ဟာ ဂီတာစွမ်းရည်ပြသ ဖို့ လုပ်ထားပေမယ့်သူ့အဘွားက ဂီတာကို ဖျက်ဆီးပြီး တားဆီးပါ တယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ မစ် ဂဲလ်ဟာ အာနက်စ်တိုရဲ့မျိုးဆက်ဆိုတာ သိသွားပြီးနောက်မှာတော့သူ့အဘိုးဖြစ်တဲ့ အာနက်စ်တိုရဲ့ ဂီတာနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အာနက်စ်တိုရဲ့ဂူမှာ ဂီတာသွား ယူပါတော့တယ်။
သူ့အဘိုးရဲ့ ဂီတာကို တီးလိုက်ပြီးနောက်မှာ တော့မစ်ဂဲလ်ဟာ သက်ရှိလူသား တွေကို မတွေ့ရတော့ဘဲသေပြီး သားလူတွေကိုပဲ တွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
သေသူတွေနေတဲ့မြို့ (Land of Dead) မှာမစ်ဂဲလ်တစ်ယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့မိသား စုဝင်တွေနဲ့ ဆုံခဲ့သလို ဒန်တီဆိုတဲ့ခွေးကလေးနဲ့အတူ သူ့အဘိုးအာ နက်စ်တိုကိုလိုက်ရှာပြီး သက်ရှိ လူသားတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။
မစ်ဂဲလ်တစ်ယောက် သေ သူတွေနေတဲ့မြို့မှာဘာတွေရင် ဆိုင်ရမှာလဲ။ သူအားကျနေရတဲ့ အဘိုးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိသွားပြီးနောက်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ် မလဲဆိုတာတော့…. ။